အမျိုးသမီးများ သားမြုံခြင်း | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး အမျိုးသမီးများ သားမြုံခြင်း
အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ သက်တမ်းမှာ ကလေးရနိုင် မရနိုင်က ယောကျာ်းရော မိန်းမပါ သားအောင်နိုင်စွမ်း ရှိမရှိ မူတည်ပါတယ်။ အချိန်တန်လို့ ကလေးရမလာတာနဲ့ အမျိုးသမီးကြောင့်ပဲလို့ တထစ်ချ သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
ဒီတခေါက်မှာတော့ သန္ဓေမအောင်နိုင်တာနဲ့ ပက်သက်လို့ ဆွေးနွေးသွားချင်တာကတော့ အမျိုးသမီးတွေ သားမြုံတာပါပဲ။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ လက်တွဲဖော်နဲ့ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုလဲ ရှိမယ်၊ အတူနေတဲ့အခါမှာ သန္ဓေတားနည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုလဲ မသုံးပေမယ့် တစ်နှစ်ကနေ နှစ်နှစ်အတွင်း ကြာသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဖူးဆိုရင်တော့ အမြုံလို့ သတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
(၁) PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဉအိမ်မှာ အရည်အိတ်တည်တဲ့ရောဂါ ခံစားနေရသူဖြစ်ခြင်း
(၂) သန္ဓေအောင်ရန်အတွက် သားအိမ်မှ လိုအပ်သော မမျိုးဉ ထုတ်လုပ်မပေးနိုင်ခြင်း
(၃) သားဉပြွန်များ ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်း
(၄) သားအိမ် နှင့် သားအိမ်ခေါင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ခံစားနေရခြင်း
(၅) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အတွက် အသက်အရွယ် ကြီးလွန်းနေခြင်း
(၆) ကာလသားရောဂါ၊ ဂနို ရောဂါများ ကဲ့သို့ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ဖြစ်ဖူးသူ ဖြစ်ခြင်း
(၇) အရက်သေစာ နှင့် ဆေးလိပ် အလွန်အကျူး သုံးစွဲသူဖြစ်ခြင်း
(၈) ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးခြင်း စတဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေကြောင့် သားမြုံတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်လား?
သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေသုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ ရာသီမမှန်တာ၊ သားဉကြွေတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြား တစ်ကြိမ် နဲ့ တစ်ကြိမ် မတူညီတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တချို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သားဆက်ခြားနည်း အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဖို့ သက်တမ်း၆လလောက် စောင့်ဆိုင်းရတာတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့်လဲ ခေတ်ပေါ်သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေကြောင့် သားမြုံတာဖြစ်စေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်က မမှန်ကန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးစွဲတဲ့ သားဆက်ခြားပစ္စည်းက ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေ ထောက်ခံချက်ရထားပြီးသား ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
FDA ကနေ ထောက်ခံချက်ရထားတဲ့ လေဒီယာရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းတွေကို ဒီ Link ကို နှိပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကုသနည်းတွေကတော့ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်လို့မှ သားမြုံနေသူ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ ချို့ယွင်းမှုနဲ ရောဂါဘယ ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရစေဖို့အတွက် အောက်ပါ အချက်တွေကို သတိထားလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
(၁) နေထိုင်မှုနှင့် အစားအသောက်ပုံစံကို ပြောင်းလဲခြင်း
(၂) မိမိရဲ့ သားဉကြွေမယ့်ရက်အတွင်းမှာ လက်တွဲဖော်နှင့် အတူနေခြင်း
(၃) စိတ်ဖိစီးမှု နည်းပါးအောင် နေခြင်း
(၄) ဆေးလိပ်၊ အရက် နှင့် ကဖင်း သုံးစွဲမှုအား လျော့ချခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်တွေမှာ ကုသမှု စနစ်တကျ ခံယူသင့်လဲ?
ရာသီစက်ဝန်း ၃၅ ရက်ထက် ရှည်ကြာနေသူအမျိုးသမီးတွေ၊ ရာသီစက်ဝန်း ၂၁ ရက်ထက် တိုနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ရာသီမလာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့ သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။